I-Luz-Inkungu eshinyeneyo-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
ISt	NguLuz de Maria de Bonilla ngo-Novemba 4, 2020:
Bantu bakaThixo: Ndiza kukubiza ukuba uthembeke kwiNdlu kaTata: ukuthembeka okungaphazanyiswa luloyiko kodwa kukhula ngokholo.
Ubuntu buxinene kwinkungu eshinyeneyo yobubi ethe yasasazeka phezu kwabantu ukuze bangakuboni ukulunga, kodwa baya kuqhubeka nokuhamba kwindlela yolawulo ekhokelela ekubeni bawele kumakhamandela kaMtyholi. Abantu bakaThixo bayaqhubeka nokuya kubuxoki obufihlwe njengento elungileyo ngentando yomntu. ICawe yoKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Krestu ijongana nezigqibo zayo ngaphandle kokuthathela ingqalelo intando kaThixo, kwaye ihlupheke kakhulu ngenxa yoku.
Iingcango zokuhlanjululwa koluntu lonke ziyaqhubeka nokuvuleka njengoko iziganeko eziveziweyo zisenzeka kumgangatho obekwe ngabanamandla boMhlaba, kwinqanaba elibekwe ngabantu abangathobeliyo, kude neNtando kaThixo kunye neKumkanikazi noMama wethu. , ngomlinganiselo obekwe ngabo bahlala kwizikhundla zamandla, belahlekisa imiphefumlo baze bayinikele kuMtyholi ngokwakhe. Ukubawa, amandla asetyenziselwa ububi, uluntu oluphazamisekileyo, ukungaziphathi kakuhle, esi sizukulwana sokufa, iimfazwe, indlala, ubuKomanisi, intshutshiso, ubumnyama, ukwahlukana, ukungabikho kothando; Okwangoku ezi ziyinxalenye yendlela ekufuneka uluntu luhambe ngayo ngenxa yemisebenzi kunye nezenzo zalo ezingalunganga. Yikhumbule into yokuba akukho siganeko sikhulu okanye esincinci esiza kwenzeka ngaphandle kokuvunyelwa yintando kaThixo. Ubuntu buyazitshabalalisa ngokungenanceba: abufumani ukwaneliseka, abufumani ukwaneliseka nantoni na ngenxa yokungabikho kothando, umgama ogcinwe kuKumkani wethu kunye neNkosi uYesu Kristu kunye neKumkanikazi noMama wethu.
Bamba iMagisterium eyiyo yeCawe yeNkosi yethu neNkosi uYesu Krestu; ungaphambuki — ububi bunxibe ufele lwegusha ngenjongo yokukudida. Eli lixesha elifanelekileyo lokuba ubonakalise umonde, unyamezelo, ukubonisa umntu ngamnye oqinisekileyo kunye nomdla kwimicimbi yobuthixo. Sebenzela ngoku uBukumkani bukaThixo: musa ukuchitha ixesha kwizinto ezingenamsebenzi, kwizinto zehlabathi. Kungxamisekile ukuba abantwana beNkosi yethu kunye neNkosi uYesu Krestu babumbane kwaye babelane nabanye abantu kwangaphambili iintsikelelo abazifumanayo, phambi kokuba iinkosi zobuxoki zoluntu zithintele ukwabiwa kwezi ntsikelelo, zithintela inkululeko yabantu kuyo yonke into malunga noSindiso lwe imiphefumlo.
Okukhona ungakhathali, kokukhona ukungakhathali kwezi mnxeba kuya kukuthwalisa ubunzima, kwaye kuya kusiba nzima kubantakwenu noodade bakho ukuyamkela iNgelosi yoXolo, IZityhilelo malunga neNgelosi yoXolo: funda… Ngubani oza kudibana kuKumkanikazi noMama wethu ukuze uqiniseke ukuba nguye obhengeziweyo.
Bathandekayo bantu bakhuselwe yimikhosi yam, baninzi abantu abaya entshabalalweni, baninzi kakhulu abawela enzonzobileni!
Thandazela abazalwana noodade bakho kwaye ubancede ngokukhawuleza.
Bantu bakaThixo, thandazani, thandazelani ubuntu, umnyango uvuleka ngokubanzi oza kuseta ithoni yekamva kuye wonke umntu.
Bantu bakaThixo, thandazelani, bathandazeleni abo bathi, besazi ukuba kwenzeka ntoni, bavale iintliziyo zabo kwiiNdawo eziNgcwele kwaye babambe ulwazi abalunikwe luThando oluNgcwele.
Bantu bakaThixo, thandazelani imeko yokomoya enkulu kunye nenyaniso enkulu kuye ngamnye wenu.
Bantu bakaThixo, thandazani ukuba nisebenze niziphathe njengabazalwana noodade bokwenyani, ingabi njengeentaka zokutya ezondla uMtyholi.
Bantu bakaThixo, thandazani: izehlo azizukulibazisa, imfihlakalo yobugwenxa iya kuvela xa ingekho i-Katechon (cf. II-Tes. 2,3-4).Ukususela kwisiGrike: τὸ κατέχον, “oko kuthintelayo”, okanye ὁ κατέχων, “ozibambayo” —oko kubizwa nguSt. Paul oko 'kuthintela'. Yabona Ukususa isithintelo NguMark Mallett
Bantu bakaThixo, thandazani, nijamelene nexesha elichazelweyo…
Thandaza uBathathu Emnye oNgcwele, yiza kuthi kunye noKumkanikazi noMama wakho, iNtombikazi enguMariya.
Ufumana uncedo lwemikhosi yam yasezulwini.
Akukho namnye unjengoThixo;
Ukuqhubeka kwesicelo sikaMoya oyiNgcwele uMichael oyingelosi enkulu kusenza siqonde ukungxamiseka kokusebenzela uBukumkani bukaThixo.
Ibiya kuba bubudenge ukukhanyela ukuba imbali yesi sizukulwana itshintshiwe ukusuka komnye umzuzu ukuya komnye, kanye njengokuba kububudenge ukucinga ukuba ubuntu buya kubuyela ebomini njengakudala…
Kukho iinguqu eziye zahlala njengesiqalo sento ezayo.
Siye salifunda kwaye salinambitha eli khwelo liqhubekayo lokukhula ngokomoya, kodwa kungokufuneka kakhulu umanyano kunye neyona Ngcwele ingcwele kunye noMama wethu osikelelekileyo apho siza kuhlala kwindlela esiboniswa yiZulu, hayi silulahla ukholo lwethu.
Ukumkanikazi noMama wexesha lokuphela,
Ndixhwile kumakhamandela obubi.
IZityhilelo malunga neNgelosi yoXolo: funda…
Ukususela kwisiGrike: τὸ κατέχον, “oko kuthintelayo”, okanye ὁ κατέχων, “ozibambayo” —oko kubizwa nguSt. Paul oko 'kuthintela'. Yabona Ukususa isithintelo NguMark Mallett
← Gisella - Inyikima ...
Iziprofeto eMelika →